ဆမ်ဆောင်းရဲ့ အလှုပ်သွက်သွက် Galaxy S4
ဆမ်ဆောင်းကတော့ စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်မျိုးကို ရောင်းချဖို့ တာစူနေပြန်ပါပြီ။ ဂလက်ဇီအက်စ်ဖိုး (Galaxy S4) ကို စတင်ရောင်းချဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၂၆-ရက်နေ့ကတည်းက အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ မိတ်ဆက်ပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။
လာမယ့် ဧပြီလ ၂၆-ရက်နေ့ကျရင် ယူကေ (ဗြိတိန်) နိုင်ငံမှာ စတင်ရောင်းချမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ခုကတည်းက အော်ဒါမှာလို့ ရပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာပြန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရောင်းချမယ့် ဖုန်းရဲ့ဈေးနှုန်း အတိအကျကိုတော့ ထုတ်ဖော် မပြောသေးပါဘူး။ ဗြိတိန်အနှံ့ (အင်္ဂလန်၊ ဝေးလ်၊ စကော့တလန်၊ အိုင်ယာလန်) က သုံးစွဲသူတွေလက်ထဲအရောက် ရောင်းချမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
စီနက် (CNet) ရဲ့ မှတ်ချက်အတိုင်းဆိုရင် သုံးစွဲသူတွေဟာ ဂလက်ဇီအက်စ်ဖိုး (Galaxy S4) ရဲ့ အခွံ (ဟန်းဆက်) အတွက် စတာလင်ပေါင် ၄၁-ပေါင်လောက်ပဲ ပေးရမယ်၊ ပြီးတော့ ဖိုး-ဂျီ ကွန်ယက်အတွက် စတာလင်ပေါင်၂၇၀-ပေါင်ကို တစ်ခါတည်း ပေးသွင်းရမှာ ဖြစ်ပြီး၊ လိုင်းရဲ့လစဉ်ကြေးကိုတော့ စတာလင်ပေါင် ၃၁-ပေါင်လောက် ထပ်ဆောင်းရဦးမှာပါလို့ ထင်ကြေးပေးထားတယ်။ ဒီဝက်ဆိုက်ရဲ့ ထင်ကြေးအတိုင်းဆိုရင် ဂလက်ဇီအက်စ်ဖိုး (Galaxy S4) တစ်လုံးအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်ဟာ စတာလင်ပေါင် ၅၀၀-ပေါင်လောက် သွားကျနေမှာ။ အမေဇုန် (Amazon) ၀က်ဆိုက်ရဲ့ ကြေညာချက်အတိုင်းဆိုရင် ၁၆-ဂျီဘီ သိုလှောင်နိုင်စွမ်း ပမာဏရှိတဲ့ ဂလက်ဇီအက်စ်ဖိုး (Galaxy S4) တစ်လုံးကို စတာလင်ပေါင် ၆၉၉-ပေါင်နဲ့ အော်ဒါမှာလို့ရတယ်ဆိုပဲ။
ဥရောပဆိုင်ရာဈေးကွက်ကလည်း ဂလက်ဇီအက်စ်ဖိုး (Galaxy S4) တစ်လုံးရဲ့ တန်းဘိုးကိုတော့ အဆိုပါ မတူညီတဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ စာရင်းတင်ထားလေရဲ့။ ဥရောပဈေးကွက်စာရင်းပါ ဈေးနှုန်းဟာ ယူရို ၆၅၀ နဲ့ပါ။
အမေရိကန်က ဂလက်ဇီအက်စ်ဖိုး (GalaxyS4) မိတ်ဆက်ပွဲ မြင်ကွင်း
ဒါပေမယ့် အိန္ဒိယဈေးကွက်စာရင်း မပေါက်သေးတဲ့အတွက် အိန္ဒိယမှာ ဘယ်ဈေးနှုန်းနဲ့ ရောင်းချမလဲ၊ ဘယ်တော့ ရောင်းမှာလဲဆိုတာကိုတော့ အသေအချာ မခန့်မှန်းနိုင်သေးပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ဂလက်ဇီအက်စ်ဖိုး (Galaxy S4) နဲ့ ပတ်သက်ရင် အိန္ဒိယက ရေငုံနှုတ်ပိတ်ရုံကလွဲပြီး ဘာမှ မတတ်နိုင်သေးပါ။ အဲ… တစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့။ အမေဇုန်ရဲ့ ဈေးနှုန်းကိုပဲ အိန္ဒိယငွေနဲ့ တွက်ချက်လိုက်ရင် ရူပီးငွေ ၅၀,၀၀၀ိ/- (ငါးသောင်း) လောက်ရှိမယ်လို့ အကြမ်းဖျင်းတော့ ခန့်မှန်းလို့ ရပါတယ်။
ဂလက်ဇီအက်စ်ဖိုး (Galaxy S4) ရဲ့ အဓိက အချက်အလက်များမှာ-
၁။ ဂလက်ဇီအက်စ်ဖိုး (Galaxy S4) ရဲ့ စကရင်း အရွယ်အစားဟာ (ထောင့်ဖြတ်) ၅-လက်မ ဆိုဒ်နဲ့ပါ။
၂။ ဂလက်ဇီအက်စ်ဖိုး (Galaxy S4) ဟာ Full HD လို့ ခေါ်တဲ့ အရည်အသွေးမြင့် တို့ထိမျက်နှာပြင် အမျိုးအစားပေါ့။ ရီဆိုလူးရှင်းကို မီဂါပစ်ဇယ်လ်နဲ့ တွက်ချက်ရင် ၁၀၈၀x၁၉၂၀ ရှိပါတယ်။ တစ်လက်မနှုန်းနဲ့တွက်ရင် တစ်လက်မကို ၄၄၁ မီဂါပစ်ဇယ်လ် ရှိပါတယ်။
၃။ ၀မ်းပွိုင့်ဆစ် (၁. ၆) ရှိတဲ့ အိတ်စ်ဇီနုစ် အောက်တာ-ကိုလ် ပရိုဆက်ဆာ (ဦးဏှောက်) ကို အသုံးပြုထားတယ်။ အချို့ဟန်းဆက်ကိုတော့ ၀မ်းပွိုင့်နိုင်း (၁. ၉) ရှိတဲ့ ကွာကမ် စနပ်ဒရက်ဂွန်လို့ခေါ်တဲ့ ကွာဇ်-ကိုလ် ပရိုဆက်ဆာပါ။
၄။ မမ်မိုရီ (မှတ်ဥာဏ်) ကိုတော့ ၂-ဂျီဘီ သုံးထားတယ်။
၅။ ဟန်းဆက်ရဲ့ သိုလှောင်နိုင်မှု ပမာဏကို ၁၆-ဂျီဘီ၊ ၃၂-ဂျီဘီ၊ ၆၄-ဂျီဘီ ဆိုပြီး ၃-မျိုး ခွဲထားတယ်။ ဒီထက် အပိုသုံးချင်သပဆိုရင် အပြင်မမ်မိုရီနဲ့ မိုက်ခရိုအက်ဒီကဒ် (Micro SD Card) အပေါက်ထဲ ထိုးထည့်ရုံသာ။ ဟန်းဆက်တိုင်းကို ၆၄-ဂျီဘီအထိ တိုးမြှင့်လို့ရတယ် ဆိုပဲ။
၆။ နောက်ဘက်ကင်မရာလို့ ခေါ်တဲ့ ဓာတ်ပုံ/ဗီဒီယိုရိုက် ကင်မရာကို ၁၃-မီဂါပစ်ဇယ်လ် တပ်ထားပြီး၊ ၀က်ကမ်လို့ခေါ်တဲ့ ရှေ့ဘက်ကင်မရာကိုတော့ ၂-မီဂါပစ်ဇယ်လ် သုံးထားတယ်။ အရည်အသွေးမြင့် ကင်မရာကို တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် ပုံထွက်ကောင်းတဲ့ နည်းပညာကိုလည်း အသုံးပြုထားတယ်။ ရှေ့+နောက်ကင်မရာ တွဲရက် တစ်ပြိုင်တည်း ရိုက်နိုင်သလို၊ ရိုက်ထားပြီးသားများကိုလည်း မလိုတဲ့ ပုံပါလူတွေကို အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားလို့ ရပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ စီနီမာဂရမ်လို့ ခေါ်တဲ့ ရုပ်ရှင်-ဓာတ်ပုံကိုလည်း ရွေးချယ် ရိုက်ကူးနိုင်ပါသေးတယ်။
၇။ စက်လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုတော့ ဂျယ်လီဘိမ် (Android 4.2.2 Jelly Bean) လို့ခေါ်တဲ့ အန်ဒရွုက် ၄.၂.၂ နဲ့ မောင်းနှင်ထားတယ်။
ဂလက်ဇီအက်စ်ဖိုး (GalaxyS4) ရဲ့ ဟန်းဆက်ပုံစံ
၀ိုင်ဖိုင်= Dual-band 802.11abgn/ac Wi-Fi
ဘလူးတု (တ်) = ၄
မြေပုံစနစ် = GPS
အကူးအပြောင်း = Infrared LED (for remote-control functions)
အားသွင်း = microUSB charger
ဗီဒီယို = Full HD video recording at 30fps
ဘက္ထရီ = Li-ion 2,600mAh battery
အရွယ်အစား = အလျား ၁၃၆.၆- မီလီမီတာ၊ အပြား ၆၉.၈- မီလီမီတာ၊ အထူ ၇.၉ မီလီမီတာ အလေးချိန်= ၁၃၀ ဂရမ်-တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ayechanmon at 5:43 PM0comments
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် အိုင်ပက်မီနီကို စတင်ရောင်းချ
အက်ပယ်လ်ကုမ္ပဏီထုတ် သင်ပုန်းအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ အိုင်ပက်မီနီ (iPad Mini) နဲ့ စတုတ္ထမျိုးဆက် အိုင်ပက် (iPad Fourth Generation) တို့ကို မနေ့က (7-12-2012) သောကြာနေ့မှာ တရားဝင်ဈေးနှုန်း သတ်မှတ်ပြီး စတင်ရောင်းချတော့မယ်လို့ NDTV က ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
၁၆-ဂျီဘီဆန့် အိုင်ပက်မီနီ (iPad Mini) ကို ၂၁၉၀၀ (နှစ်သောင်းတစ်ထောင်ကိုးရာ) ရူပီးနဲ့ စတင်ရောင်းချပါ့မယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ သိုလှောင်မှုပမာဏအရ တစ်ဆင့်ချင်းဆီကို ရူပီး ၆၀၀၀ (ခြောက်ထောင်) နဲ့ လည်းကောင်း၊ ဆယ်လူလာ (စင်းကဒ်ပါတဲ့) မိုဒယ်အတွက် နောက်ထပ် ၈၀၀၀ (ရှစ်ထောင်) ဖိုးလည်းကောင်း ထပ်ပေါင်းသွားမယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။
သို့ဖြင့် အိုင်ပက်မီနီ (iPad Mini) ရဲ့ ဈေးနှုန်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သွားပါမယ်-
၀ိုင်ဖိုင် (Wi-Fi) သက်သက် ဈေးနှုန်း
၁၆-ဂျီဘီ= ၂၁၉၀၀ ရူပီး
၃၂-ဂျီဘီ= ၂၇၉၀၀ ရူပီး
၆၄-ဂျီဘီ= ၃၃၉၀၀ ရူပီး
၀ိုင်ဖိုင် နဲ့ ဆယ်လူလာ (Wi-Fi + Cellular) ဈေးနှုန်း
၁၆-ဂျီဘီ= ၂၉၉၀၀ ရူပီး
၃၂-ဂျီဘီ= ၃၅၉၀၀ ရူပီး
၆၄-ဂျီဘီ= ၄၁၉၀၀ ရူပီး
(မှတ်ချက်။ ကနေ့ပေါက်ဈေးအရ အိန္ဒိယရူပီး ၅၄.၅၇ ကို ၁-ဒေါ်လာနဲ့ ညီမျှပါတယ်။)
1.1.iPad mini ရဲ့ အရွယ်အစား
အိုင်ပက်မီနီ (iPad mini) ရဲ့ ထောင့်ဖြတ်ဆိုက်က ၇ ဒသမ ၉ လက်မပါ။
အိုင်ပက်မီနီ (iPad mini) ရဲ့ တိကျတဲ့ အရွယ်အစားမှာ-
အမြင့် = ၇.၈၇ လက်မ (၂၀၀ မီလီမီတာ)
အလျား = ၅.၃ လက်မ (၁၃၄.၇ မီလီမီတာ)
ဗျက် (အထူ) = ၀.၂၈ လက်မ (၇.၂ မီလီမီတာ တမတ်အထူ)
အလေးချိန် = ၀.၆၈ ပေါင် (၃၀၈-ဂရမ်) (၀ိုင်ဖိုင်- အိုင်ပက်မီနီ)
အလေးချိန် = ၀.၆၉ ပေါင် (၃၁၂-ဂရမ်) (၀ိုင်ဖိုင်+ဆယ်လူလာ အိုင်ပက်မီနီ)
1.2.iPad mini ရဲ့ အရည်အသွေး
အိုင်ပက်မီနီ (iPad mini) ရဲ့ ရုပ်ပြအရည်အသွေးကတော့ အိုင်ပက်-၂ အတိုင်းပါပဲ။ ၁၀၂၄ x ၇၆၈ မီဂါပစ်ဇယ်လ်ပါ။ အိုင်ပက်-၃ လို မြင်ကြည်လွှာ (Retina) မပါဘူး။ ချပ်စ်က အိုင်ပက်-၂ အတိုင်း Dual-core A5 ပြန်သုံးထားတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ ကင်မရာကိုတော့ အိုင်ပက်-၃ လို 5MP မြှင့်ထားတယ်။
ဆယ်လူလာ (3-G/4G) အတွက် နာနိုဆင်းကဒ် (Nano-SIM) ကို ပြောင်းသုံးထားသလို၊ ပါဝါ / ဒေတာအတွက်လည်း အပြားသေးတဲ့ လိုက်နင်း (Lightning) ကို ပြောင်းသုံးထားပြန်တယ်။ ပြီးတော့ အသံစနစ် (Siri) ထည့်သွင်းပေးထားတယ်။
အိုင်ပက်မီနီ (iPad mini) ၀ိုင်ဖိုင်သက်သက်ကို နိုဝင်ဘာလ ၂-ရက်နေ့ကတည်းက နည်းပညာ အားကြီးတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ စတင်ရောင်းချခဲ့သည့်အတွက် အိန္ဒိယက ၅-ပတ် နောက်ကျပါတယ်။
2. iPad with Retina (iPad-4)
မြင်ကြည်လွှာပါ အိုင်ပက်၊ စတုတ္ထမျိုးဆက် အိုက်ပက်၊ အိုင်ပက်-ဖိုး ဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ် နောက်ထုတ် အိုင်ပက် (iPad 4) ကို ၃၁၉၀၀ ရူပီးကနေ စတင်ရောင်းချမှာ ဖြစ်ပြီး သိုလှောင်မှုပမာဏအရ တစ်ဆင့်ချင်းဆီကို ရူပီး ၆၀၀၀ (ခြောက်ထောင်) နဲ့ လည်းကောင်း၊ ဆယ်လူလာ (စင်းကဒ်ပါတဲ့) မိုဒယ်အတွက် နောက်ထပ် ၈၀၀၀ (ရှစ်ထောင်) ဖိုးလည်းကောင်း (မီနီအိုင်ပက်အတိုင်း) ထပ်ပေါင်းသွားမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ယင်းကြောင့် အိုင်ပက်-ဖိုး(iPad 4) ရဲ့ ဈေးနှုန်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သွားပါမယ်-
၀ိုင်ဖိုင် (Wi-Fi) သက်သက်
၁၆-ဂျီဘီ= ၃၁၉၀၀ ရူပီး
၃၂-ဂျီဘီ= ၃၇၉၀၀ ရူပီး
၆၄-ဂျီဘီ= ၄၃၉၀၀ ရူပီး
၀ိုင်ဖိုင် နဲ့ ဆယ်လူလာ (Wi-Fi + Cellular)
၁၆-ဂျီဘီ= ၃၉၉၀၀ ရူပီး
၃၂-ဂျီဘီ= ၄၅၉၀၀ ရူပီး
၆၄-ဂျီဘီ= ၅၁၉၀၀ ရူပီး
အိုင်ပက်-၄ ဟာ ပုံမှန် အရွယ်အစားဖြစ်တဲ့ ထောင့်ဖြတ် ၉.၇ လက်မနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး၊ စတုတ္ထမျိုးဆက် မြင်ကြည်လွှာပါ iPad with Retina (Fourth Generation) လို့ နာမည် ပေးထားတယ်။ ဒီ iPad with Retina ကိုတော့ မတ်ခ်ျလတုန်းက ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့တဲ့ The New iPad (iPad-3) နဲ့ အနည်းငယ်ပဲ ထူးခြားချက် ရှိပါတယ်။
iPad with Retina (iPad-4) ရဲ့ ထူးခြားချက်များ-
၁။ ချပ်စ် = Dual-core A6X (quad-core graphics ပါဝင်တယ်)
၂။ လိုက်နင်း (Lightning) ပါဝါ / ဒေတာ ကြိုးပေါက်
အိုင်ပက်-၃ က Dual-core A5X သုံးထားတယ်။ ဒါကြောင့် အိုင်ပက်-၄ ဟာ အိုင်ပက် -၃ ထက် ၂-ဆ မြန်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ကျန်တဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက် အားလုံးနီးပါးက ထပ်တူထပ်မျှပါပဲ။ ဆင်းကဒ်ကိုလည်း အိုင်ပက်-၃ လိုပဲ Micro-SIM ကို ပြန်သုံးထားတယ်။
Posted by ayechanmon at 5:14 PM0comments